Chelsea Oo Saxeexyada AFAR Ciyaartoy Ku Dhawaaqaysa Toddobaadkan & Barcelona Oo Ay Si Xun Ugu Garaacday Ciyaartoy Ay Isku Haysteen - Gool24.Net
Chelsea Oo Saxeexyada AFAR Ciyaartoy Ku Dhawaaqaysa Toddobaadkan & Barcelona Oo Ay Si Xun Ugu Garaacday Ciyaartoy Ay Isku Haysteen
Chelsea ayaa isku diyaarinaysa in toddobaadkan ay si rasmi ah ugu dhawaaqyo saxeexyada afar ciyaartoy oo cusub oo ay kusoo kordhinayso xiddigaheeda, kuwaas oo laba ka mid ah ay ka imanayaan Faransiiska, mid Jarmalka kasoo duulaya iyo laacibka afraad oo Premier League gudihiisa ay ka dhex heleen.
Tababare Frank Lampard oo hore gacanta ugu dhigay Timo Werner iyo Hakim Ziyech ayaa waxa la sheegay inuu ku jiro farxad isaga oo is tusinaya inuu u hirgalay qorshihiisii suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan.
Chelsea ayaa la sheegay inay heshiis laba sannadood ah la gaadhay difaaca ruug-caddaaga reer Brazil ee Thiago Silva oo uga soo wareegaya PSG oo uu u ciyaarayay siddeeddii sannadood ee ugu dambeeyey, laakiin qandaraaskiisa oo dhamaaday Sabtidii ay markiiba heshiis gaadheen Blues.
Waxa kale oo ay Chelsea heshiis shan sannadood ah la gaadhay kubbad-sameeyaha reer Germany ee Kai Havertz kaas oo shalay ay warbaahinta Ingiriisku caddeeyeen in Bayer Leverkusen ay si buuxda uga heshiiyeen lacagta ay ku kala iibsanayaan. Xiddigan 21 jirka ah ayaa muddo dheer ay Blues soo daba taagnayd, waxaanu ahaa bartilmaameedka ugu weyn ee Lampard, hase yeeshee waxa la filayaa in maalmahan si rasmi ah loosoo bandhigo.
Difaaca reer England ee kooxda Leicester City ee Ben Chilwell ayaa sidoo kale ay Chelsea ku guuleysatay saxeexiisa sida ay warbaahinta Ingiriisku qorayaan waxaana uu usoo duulayaa magaalada London oo uu ku mari doono tijaabada caafimaadka, waxaanay Blues ka bixinaysaa 50 milyan oo Gini.
Laacibka afraad ee kusoo waajahan Stamford Bridge ayaa ah Malang Sarr oo difaaca uga ciyaara kooxda reer France ee Nice, si bilaash ahna ay kula soo wareegayaan kaddib markii uu dhamaaday qandaraaskii uu kula jiray kooxdaas.
21 jirkan ayay Chelsea heshiiskiisa ku garaacday Barcelona oo maalmihii ugu dambeeyey ku hawlanayd sidii ay uga soo horqaadi lahayd Blues.
Inkasta oo aanay Blues war kasoo saarin saxeexa laacibkan, haddana wargeyska Star ee kasoo baxa UK ayaa shaaciyey in kooxda reer London ay ay heshiis afar sannadood ah la saxeexatay oo kaliya shaacintiisu ay hadhsan tahay.
Dad waa ween ba tihiin berra nagadaya ciyaar
Yahay aay barcelona aay ka dulqaday oo Chelsea la waregtay awayna yaab badana